ब्रा, पेन्टी र जुत्तामा अमेरिकाको झण्डा ! | Jukson
६ जेठ | नेपाल र भारतमा देशको झण्डाको पहिरनको सवालमा निकै कडाई गरिएको छ । र, कसैले झण्डाको पहिरन बनाउँदा एउटा सिमामा रहेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा यहाँ, राष्ट्रियता र झण्डाको अपमान भएको ठानिन्छ । र, कानुनी रुपमा झण्डाको जथाभावी प्रयोग गर्न रोक लगाईएको छ ।
तर विश्वमा कतिपय यस्ता देशहरु छन् । जुन देशको झण्डा जुत्ता, ब्रा, पेन्टी जस्ता पहिरनमा पनि प्रयोग गरिन्छन् ।अमेरिका एउटा त्यस्तै राष्ट्र हो । जुन देशको झण्डालाई मानिसहरुले जस्तो खाले पहिरन पनि बनाएर लगाईराखेका हुन्छन् । तपाईले गुगल गर्नु भयो भने झण्डाको प्रयोग गरेर बनाईएका जुत्ता र विभिन्न खाले पहिरन प्रशस्तै भेट्नुहुन्छ ।
यदि नेपालमा यसरी झण्डाको पहिरन र जुत्ता बनाएको खण्डमा त्यसको चर्को आलोचना हुने गर्छ । सर्वसाधारण नेपालीले पनि यस्तो खाले पहिरन र जुत्तामा नेपाली झण्डाको प्रयोग भएको पाए भने विरोधमा उत्रिहाल्छन् ।
त्यसो त अमेरिकामा पनि त्यहाँको झण्डालाई पहिरन बनाउन पाउने कि नपाउने ? भन्ने विषयमा कानुन छ । खासगरि अमेरिकामा कर्मचारीहरु, आगो निभाउने व्यक्तिहरु, आर्मी र प्रहरीले ब्याच बनाएर झण्डालाई लगाउने चलन छ । तर व्यवसायिक र अभद्र तरिकाले झण्डाको प्रयोग गर्न नपाईने नियम छ । तर नियम मिच्दै अमेरिकाको झण्डालाई यसरी व्यवसायिकरण र अपमान गरिरहेका छन् मानिसहरु ।
अन्तराष्ट्रिय अर्वाडमा नेपाली कलाकारको यस्तो प्रस्तुती (भिडियो सहित)